Pramiracetam | Kordhinta Kobcinta Kobcinta Korantada ee ugu Wanaagsan
Waa Maxay Pramiracetam Pramiracetam, oo sidoo kale loo yaqaan Pramistar, waa kobcinta garashada oo maskaxdaada u oggolaaneysa inay u qabato sida ugu fiican. Pramiracetam nootropics waa cunsuriyad laga soo farsameeyo piracetam. [...]
Saamaynta Caafimaadka ee Liyuuga 丨 Qarsoodiga Dhalmada
Waa Maxay Lycopene Lycopene (502-65-8) waa phytonutrient dhir ka tirsan fasal ka mid ah carotenoids. Carotenes waa midabyo midab dhalaalaya oo laga helo unugyada dhirta qaarkood, algae, iyo bakteeriyada qaarkood. Kuwani [...]
Choline iyo Nootropic Cuntada Dheeriga ah Citicoline Sodium iyo Alpha GPC waa laba ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee loo yaqaan 'nootropic supplements' kuwaas oo lagu yaqaan inay ku jiraan qaddar deeqsinimo leh oo choline ah. Choline waa mid ka mid ah kiimikooyinka muhiimka ah [...]
Dulmarka L-theanine L-theanine waa sahlan tahay in laga helo caleemaha shaaha, labadaba shaah cagaaran iyo madow. L-theanine waa amino acid, foomka la heli karo waxaa ka mid ah kaniin, kiniin dukaamo badan, [...]